Vondron’ny taxi matihanina : « Misy ny mpanakorontana… » | NewsMada
Vondron’ny taxi matihanina : « Misy ny mpanakorontana… »
Par Taratra sur 07/12/2017
« Misy ny fikononkononana hanao fitokonana ataon’ireo taxi ao amin’ny FTAR . Heverinay izany fa fanakorontanana ny firenena sy ny vahoaka, efa tratry ny fahasahiranana amin’ny fiainana. Mitaona ny namana mpisehatra amin’ny taxi izahay fa fotoana izao ahafahantsika manararaotra miasa sy mitady vola amin’izao fety izao. Mba tsaratsara ny karama », hoy ny filohan’ny fikambanana, Vondron’ny taxi matihanina (VTM), Randrianarisoa Jeannot omaly. Nohitsiny fa tsy mitondra fampivoarana sy fampandrosoana izany fitokonana izany ka hotoherina amin’ny alalan’ny asa. « Hiharihary eo ireo manana hevitra tsy mampandroso ny firenena. Fotoana fiasana izao ka tsy tokony ho helingelenina ny fifamoivoizana », hoy ihany izy. Notsiahiviny fa efa ao anatin’ny fiketrehana ny fampijoroana ny fikambanana VTM ho ara-panjakàna izy ireo izao ary hivoaka tsy ho ela izany.
Miantso ny mpitandro filaminana
Efa anatin’ ny firosoana amin’ny fanatanterahana ny vina sy tetikasa ary fandaminana hanatsarana ny sehatr’asan’ny taxi izy ireo. « Hiseho miharihary ho hitan’ny besinimaro tsy ho ela ny asa ataonay . Ohatra, hanana ny birao fiasany ny VTM. Eo koa ny karatra maha matihanina. Tanjon’izy ireo ny fampiroboroboana ny tanàna sy ny firenena mba ho tombontsoan’ny mpanjifa sy fampiroboroboana ny fampivelarana asa ataonay taxi. Teny fanevan’ny VTM : “ ny asa fivelomako, anjara birikiko amin’ny fireneko”.
Nanterin’izy ireo fa fotoana fiasàna izao ka tsy tokony ho helingelenina ny fifamoivoizana amin’izao andro izao. “Mitaona ny mpitandro filaminana handray ny andraikiny manoloana ny mety ho fitokonana hibahanana ny lalana izahay. Efa mitohana be izao ny lalana mbola ampiana fitokonana indray. Raiso tompoko ny andraikitrareo amin’izany raha tsy hoe misy tsikombakomba indray angaha any ?”, hoy izy.